Sheari: chii icho, hunhu uye mhedzisiro mukubhururuka | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 06/04/2021 11:51 | Mamiriro ekunze
Nhasi tiri kuzotaura nezve imwe yengozi mamiriro emamiriro ekunze emuchadenga. Ndezve iyo bvudzi. Pakati petsaona dzemumhepo dzinokonzerwa nemamiriro ekunze uye mamiriro ezvakatipoteredza, shear inopinda. Tsaona dziri pasi pegumi muzana muzana dzinokonzerwa nemamiriro ekunze. Kunyangwe zvakadaro, chiitiko ichi chiri chechipiri chikonzero, shure kwechando, icho chinogadzira tsaona.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese hunhu, mavambo uye mhedzisiro yekuveura.
2 Mamiriro ekunze ekugera
3 Sheari uye avhiyesheni
4 Shanduko mukona
Chekutanga pane zvese kuziva kuti shear chii. Iyo inozivikanwa zvakare nezita remhepo shear uye iri mutsauko mukumhanya kwemhepo kana kunongedza pakati pemapoinzi maviri mudenga remhepo. Zvichienderana nekuti mapoinzi maviri aya ari pamaonero akasiyana enzvimbo dzakasiyana, shear inogona kuve yakatwasuka kana yakatwasuka.
Isu tinoziva kuti kumhanya kwemhepo kunoenderana zvakanyanya nekudzvinyirira kwemhepo. Nhungamiro yemhepo inoenda zvinoenderana nekumanikidza kwemhepo. Kana pane imwe nzvimbo kune yakaderera mhepo yekudzvinyirira, mhepo inoenda yakananga iyo nzvimbo sezvo "ichizadza" iyo iripo gap nemhepo mutsva Mhepo shear inogona kukanganisa iyo kumhanya kwendege nendege panguva yekuenda uye kumhara zvakashata. Inofanira kutarisirwa mupfungwa kuti zvikamu zviviri zvekubhururuka ndizvo zvinonyanya kutambura.
Iyo mhepo gradient inogona kukanganisa zvakakomba mabhesi aya ekubhururuka. Icho zvakare chinhu chakakosha chinotarisisa kuomarara kwedutu. Zvichienderana nekuyerera kwemhepo, kumhanya uye kumanikidza kwemhepo, iwe unogona kutaura kukomba kwedutu. Imwe yekutyisidzira inyonganyonga iyo inowanzo kuve yakabatana nesheari. Iko kune zvakare simba pane kukura kwetropical madutu. Uye ndezvekuti shanduko iyi mukumhanyisa kwemhepo inokanganisa akasiyana meteorological misiyano.
Mamiriro ekunze ekugera
Ngatione kuti ndeapi mamiriro makuru emuchadenga atinogona kuwana neiyi mamiriro ekunze panguva yekufamba nendege kana kungori mumhepo
Mafonti uye epamberi masisitimu: Inokosha mhepo yekuveura inogona kucherechedzwa kana mutsauko wekupisa nepamberi uri madigiri mashanu kana kupfuura. Inofanirwa zvakare kunge ichifamba ingangoita gumi neshanu mapfundo ekumhanya kana kupfuura. Mafronu zviitiko zvinoitika mumativi matatu. Muchiitiko ichi, shear yakatarisana inogona kucherechedzwa chero pakakwirira pakati pechiso uye tropopause. Isu tinorangarira kuti iyo troposphere inharaunda yemuchadenga uko kunoitika zvemamiriro ekunze.
Zvipingamupinyi kuyerera: Kana mhepo ichivhuvhuta ichibva nekwamakomo, yakatwasuka shear inogona kucherechedzwa pamateru. Uku ndiko kuchinja kwekumhanyisa kwemhepo sezvo mweya uchifarira kukwira kumusoro kwegomo. Zvichienderana nemhepo yekumhepo padanho rakatakurwa nemhepo pakutanga, tinogona kuona kumhanya kukuru kana kushoma kuchikwira.
Investment: Kana isu tiri pane yakajeka uye yakanyarara husiku, inversion yemwaranzi inoumbwa padyo nepamusoro. Uku kupinduka kunoratidza kuti tembiricha yepasi yakadzikira pamusoro pepasi uye yakakwira pakakwirira. Kukakavara hakukanganisi mhepo iri pamusoro payo. Shanduko yemhepo inogona kuve madhigirii makumi mapfumbamwe munzira uye anosvika makumi mana mapfundo mukumhanya. Dzimwe dzenzvimbo dzemhando yepasi dzinogona kucherechedzwa husiku. Density misiyano inogona zvakare kukonzera mamwe matambudziko mukubhururuka. Ngatisakanganwei kuti kuwanda chinhu chakakosha kuita munzira yekumhepo.
Sheari uye avhiyesheni
Tichaona zvinoitika kana chiitiko ichi chemamiriro ekunze chichiitika uye isu tikakwira ndege. Pakutanga, zvakaoma kuona. Eta zvinoreva kuti vatyairi vendege havana zvakare nyore kuona mhando dzemamiriro ekunze. Mumishumo yendege, vatyairi vendege vanonyatso zivikanwa nezve mamiriro ezvinhu mukutarisana nerudzi urwu rwechiitiko kuitira kuti vagone kugadzirira uye vatore mhinduro dzinoshanda. Muchokwadi, ndege zhinji dzine yavo shear detector.
Paunowana nzvimbo inotungamirwa nemhepo shanduko zvachose pakati pekubva kana kumhara, chakanakisa chinogona kuitwa kusachinja kumisikidzwa kwendege uye nekuisa simba rakanyanya. Muchiitiko chekumhara, zviri nani kubvisa manejimendi uye kukwira usati wapinda munzvimbo. Muchiitiko chimwe nechimwe, inofanirwa kutariswa kuti iri mamiriro akaoma kubata, nekuti tsinga dzinogona zvakare kutamba mutambo wakashata.
Chikonzero chechiitiko ichi chakasiyana uye chinonyanya kukanganisa mamiriro emuno enhandare imwe neimwe. Iyo orography yenzvimbo dzakakomberedza inoitisa kudzora kuyerera kana mhepo. Semuenzaniso, muCanary Islands, nhandare dzinokanganiswa zvakanyanya kana zvishoma nekuda kwekuzorora kwakakosha kwenzvimbo. Pano ndipo patinoona kuti zvimwe zviitiko zvinowanzoitika kune ndege dzinomhara munzvimbo idzi.
Ngatimbofungidzirai ndege inobhururuka yakatwasuka uye nhanho iri munzvimbo yekuyerera kwemuchadenga munzira yakadzika. Nekuda kwayo inertia, iyo ndege ichagara kwechinguva pane inomhanya nguva uye trajectory zvine chekuita nePasi. Munguva yese iyi, iyo inoshanda yazvino yakakomberedza mapapiro ayo yakatowirirana nenzira yayo yekubhururuka, asi ichave yawana chinhu chakamira. Sero richaona mhosva isiriyo uye mutyairi wendege achadzorwa nehanisi apo chigaro chinodonha pasi pake.
Mushure mekutanga kupinda mune yakadzika, mhedzisiro yesimba inowedzera uye iyo ndege inodzoreredza kona yayo yakagadziriswa yega. Nenzira iyi, vanoenderera mberi neruvara zvakajairika, kunze kwekunge iyo nyowani yekubhururuka nzira iine chiyero chedzinza chakabatana nePasi. Ndokunge, zvakaenzana nekudzika kwemhepo yekuyerera kana kusvetuka izvozvi zvinosanganisira kumusoro kumusoro yakatwasuka chinhu.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda pamusoro pebvudzi uye hunhu hwaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Mamiriro ekunze » Sheari